မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: အိန္နိယ နိုင်ငံရဲ.လျှပ်စစ်ထုပ်လုပ်မှု သတင်းကိုလေ့လာပါ
((ဧရာဝတီ မှာ ရေကာတာ တည်ဆောက်ရင် မြစ်ကြီး ခန်းခြောက် သွားမယ်ဆိုတာ ပညာရှင်များနဲ. သေခြာစွာ သုတေသနလုပ်ပြီးမှ ပြောဆိုသင့်ပါတယ်။ ဆိုလိုခြင် တာက ခြောက်ခန်းနေတဲ့မြစ်မှာ လျှပ်စစ်ထုတ်လို. မရဘူးဆိုတာထင်ရှားတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။))
ဟုတ်တာပေါ့ ရေကာတာတွေ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မြစ်ဆုံနေရာမှာတော့
ရေတွေအားလုံးကို နျူးယောက်မြို.လောက်ကြီးတဲ့ Dam ရေကာတာ ကြီးတွေက ရေကန်လို ဆည်ထားမှာကိုး ရေမခန်းပါ...
သို.သော်.. ခုလို.ရေတွေ ဆက်မစီးနိုင်အောင် ဆည်ကြီး (၈)ခုက ပိတ်ပြီး ထိမ်းချုပ် ကာဆီးထားတဲ့ အတွက် မိုးနည်းတဲ့ရာသီတွေမှာ "ရေကာတာ အောက်ပိုင်းက ဧရာဝတီ မြစ်ကြော တလျောက်လုံး " ရေခန်းလာနိုင်ပါတယ် .. စဉ်းစါးရသိပ်မခက်ပါဘူး နော။
တဖန် ရေဝေကုန်းတန်း မြစ်ညာက တောင်ပေါ်မှာ မိုးသည်းထန်လွန်းပြန်ရင်လည်း ဆည်ကြီးတွေမှာ ရေပြည့်လျှံတက်လာပြီး ဆည်ကြီးတွေထဲက ရေကို ထိမ်းမထားနိုင်တော့ရင် ဆည်တွေကို ဖွင့်ကိုဖွင့်ချပေးရ တော့မယ်၊ ဖွင့်မပေးရင် ရေအားကြောင့် ဆည်ကျိုး ဆည်ပေါက်နိုင်တာကိုး .....ဒီတော့ ဆည်အောက်ပိုင်း မြစ်ကမ်းပါးပေါ် မြစ်ကြီးနားလို
မြို.ကြီးတွေ ရွာတွေ လူတွေ တိရစ်ဆန်တွေ နဲ့ စိုက်ခင်းတွေ ရေလွှမ်းမိုး အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ် ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။
ယနေ.သတင်းတွေထဲမှာလည်း နှစ်စဉ်ကြား နေရတာပဲ၊ အာဏာပိုင်တွေက လယ်သမားတွေကို အကြောင်းမကြားပဲ မြစ်ညာက ဆည်ဖေါက်ချလို. ရွာတွေ စိုက်ခင်းတွေရေမြုတ် သီးနှံတွေပျက်စီးကြ ဘ၀ပျက်ကြရတာတွေ။
အလွန် စိုးရိမ် ထိတ်လန်.ဖွယ်ကောင်းတာ က တော့ မြစ်ဆုံဆည်ကြီးတွေ
ဟာ စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ.ကြောကြီးရဲ. သက်ရောက် ဧရိယာပေါ်မှာ တည်ရှိနေတာကြောင့်
မြေငလျင်ကြောနဲ. အလွန်နီးကပ်နေတယ် ဒါက ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေ seismic ငလျင် ပညာရှင်တွေ ပြောနေတာ ။
ငလျင်ကြီးလှုပ်ချိန် နီး မနီး ဆိုတာကို
ကြိုတင်တိုင်းတာဖို. ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ Technology , device, warning system , စသည်တို. မပ်ါသေးပါဘူး (အတိုးတက်ဆုံး ဂျပန်နိုင်ငံ က ငလျင် ဆူနာမီနဲ. အပျက်အစီးတွေ ကိုသာကြည့်တော့) ။
ဒါကြောင့် ကမ်ဘာ့အဆင့်မှီ ပညာရှင်များနဲ. သေခြာစွာ ဆက်လက် စုံစမ်း သုတေသနလုပ် ရန်လိုနေသေးတဲ့ အချက်အလက် (၉) ချက်ကျန်နေသေးကြောင်း ကို တရုတ်ပညာရှင်များကိုယ်တိုင် လေ့လာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စါမျက်နှာ (၉ဝဝ) ပါ အစီရင်ခံစါမှာ
ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒီ report ကို ဖတ်ခဲ့ရသူ က VOA ကို ကိုယ်တိုင်ပြောထားတာ နားထောင်သင့်ပါတယ်။
မြစ်ဆုံရေကာတာ ဆိုးကျိုး ကောင်းကျိုး http://www.dawnmanhon.com/2011/08/blog-post_950.html
မြစ်ဆုံရေကာတာ အရေးဆွေးနွေးချက် http://www.voanews.com/burmese/news/democracy-forum/burma_forum_07-17-2011-125671038.html
ဧရာဝတီအရေး သည် အမျိုးသားအရေး http://www.voanews.com/burmese/news/news-analysis/news_analysis_08-27-2011-128491078.html
ဧရာဝတီရေကာတာ အစီရင်ခံစါ http://www.voanews.com/burmese/news/news-analysis/news_analysis_07-23-2011-126043778.html
မြန်မာစစ်အစိုးရ၊ ပြည်ကြီးတရုတ်နှင့် နာကျင်နေသော ခံစားမှုများ http://myatlayngon.blogspot.com/2011/07/blog-post_9612.html
ပြည်တွင်းလျှပ်စစ် ဖူလုံဖို. လိုနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်း .. ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်ရာမှာ အသန်.ရှင်းဆုံး နည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ.ဖြင့် မောင်းနှင်ရတဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး စက်ရုံတွေ
တည် ဆောက်သင့်ပါတယ်- စစ်လေယဉ်တွေတောင် ရုရှားထံက အစီး ၂၀-၃၀ ၀ယ်နိုင်သေးတာပဲ။
မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ.ကို နောင်အနှစ် ၂၀ အထိ တရုတ်နဲ.ယိုးဒယားထံကို ရောင်းစါးထားလို.
ပြည်တွင်းသုံးဖို. လုံလုံလောက်လောက် မရှိတော့ဘူး လို. ကြား သိရတယ်- အစိုးရကတော့ ဘာမျှ တိတိကျကျမကြေငြာပါ။
ပြည်ပကို ရောင်းချလိုက်တဲ့ စါချုပ်စါတန်း
Terms နဲ. ရောင်းလို. ၇ခဲ့ပြီးသမျှငွေများ ၄င်းငွေများဘယ်နေရာမှာ သုံးခဲ့တယ် ဆိုတာတွေ.....
နောက်နှစ်တွေမှာ ရဦးမယ့် ငွေစါရင်း ဘယ်နေရာမှာသုံးဦးမယ် ဆိုတာတွေ ပြည်သူကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ယနေ.ထိ ထုတ်ပြန်ကြောငြာပေးခြင်း မရှိသေး ..အမှောင်ချထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရသစ်ပေါ်လာပြီး ပြည်သူအများအကျိုး လုပ်နေပါပြီ လို.သာ အော်နေပြီး တိုင်းပြည်ရဲ. ၀င်ငွေအများ ဆုံးရနေတဲ့ သယံဇာတ ဓါတ်ငွေ. အရောင်း အ၀ယ်စါချုပ်ပါ အချက်များ ၀င်ငွေ သုံးငွေရှင်းတမ်းကို ပြည်သူကို ခုနေ.ထိ ချမပြတာ သတင်းထုတ်ပြန်မပေးတာ ဟာ ဘာသဘောလဲ ဆိုတာ အဖြေပေးပါ မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် (မူဝါဒရေးရာဌာန) ခင်ဗျား...
Comment by ပြည်ကောင်းအောင်
ဧရာဝတီ တသွင်သွင်စီးစေ ဖို. --- http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=22010
A petition signed by nearly 1,600 influential Burmese persons, including politicians, journalists, writers, artists and film directors, has been sent to President Thein Sein on Thursday withacampaign message titled “From Those who Wish the Irrawaddy to Flow Forever.”
ဒို.များအသဲကို ခွဲရွေ. ....
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း တည်ဆောက်နေပုံ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို မြန်မာစာတန်းထိုးထားတာပါ.. ကြည့်လိုက်မိတော့ ရင်ထဲမှာ အတော် ခံစားရပါတယ် ... မြေထိုးတဲ့ ဘူဒိုဇာကြီးဟာ ရင်ကို ထိုးခွဲလိုက်သလိုပါဘဲ.. နီနီရဲရဲမြေကြီးတွေဟာ မြန်မာပြေသားတွေ ရဲ့ နှလုံးသွေးတွေပါလား ... ပြောသွာသေးတယ်ဗျာ သစ်တောတွေဟာ သဘာဝအတိုင်းဘဲရှိသေးတယ်တဲ့ ...